Mapurisa Anopinda neChisimba paMuzinda weMDC T muHarare
Ndira 12, 2012
Mapurisa anonzi asunga vashandi veMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai pamuzinda webato iri paHarvest House muHarare zvichitevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mamwe mapurisa nemusi weChitatu paakanetsana nevanotengesera mumigwagwa.
Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo asvika pamuzinda weMDC-T ndokusunga vashandi vebato iri vaviri pamwe nenhengo nhatu dzeboka revechidiki mubato iri.
Vanowona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki mubato iri, VaClifford Hlatshwayo, vanoti mapurisa anga akapakatira zvombo asvika pamuzinda webato ravo ndokunanga muchitoro chinotengeswa mbatya dzebato ravo ndokusunga vanhu vose vanga varimo zvakonzera kuti chitoro ichi chavharwe.
Vaenderera mberi vachipomera Zanu PF mhosva yokushanda nemapurisa kuti asunge nhengo dzeMDC pamberi pesarudzo dzinonzi nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nebato ravo reZanu PF, dzinogona kuitwa gore rino.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa mupurovhinzi yeHarare, VaJames Sabau, vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi.
Asi VaSabau havana kuda kutaura chikonzero chaita kuti vanhu ava vasungwe vachiti mapurisa achiri pakati pekuferefeta.
Vasungwa ava vakachengetwa pakamba yeHarare Central.
Asi mumwe mupurisa ari pakamba iyi, uyo asina kuda kudomwa zita, audza Studio 7 kuti nhengo dzeMDC idzi dzingangopomerwa mhosva yokurova mapurisa zvichitevera chiitiko chemusi weChitatu pakamhanyisana mapurisa nevanotengesera mumigwagwa.
Mupurisa uyu ati vanhu vazhinji vari kutengesera mumigwagwa iri pedyo nemahofisi eMDC vari kufungidzirwa kuti inhengo dzebato iri dzakadyarwa mumigwagwa kuitira kuti dzikonzere mhirizhonga.
Zvinonzi pane mapurisa matatu akarohwa muchiitiko cheChitatu asi VaSabau havana kuda kutaura nezvenyaya iyi.
Zvichakadaro, kurwisana kwakaita mapurisa nevanotengesa mumigwagwa yemuHarare uye kupinda nechisimba kwemapurisa pamuzinda webato reMDC T weHarvest House, pamwe nekusungwa kwenhengo dzebato iri, kwave kuita kuti pabude mashoko akawanda pamusoro pemabatirwo ari kuitwa basa nemapurisa.
Vamwe vave kuona mapurisa seave kupindira zvakanyanya mune zvematongerwo enyika, ukuwo vamwe vachiti mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo.
Aka hakasi kekutanga kuti mapurisa arwisane nevanotengesera mumigwagwa achizopedzesera opinda pamuzinda weMDC T achisunga vanhu.
Mutauriri werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vanoti chiri kukonzera kuti mapurisa arwisane nevari kutengesera mumigwagwa ndechekuti mapurisa ari kudzivirira musika wawo wemukamba uri pedyo nekamba yeHarare Central Police Station.
Mumiriri weMazowe North muparamende, uye vari nhengo yeZanu PF, Retired Lieutenant Colonel Cairo Mhandu, vanoti mapurisa eZRP aida kuona kuti mitemo yekanzuru yatewedzwa.
Hurukuro naVaPrecious Shumba Pamwe naVaCairo Mhandu